Cinezela pdf: iinkqubo kunye neewebhusayithi ukunciphisa ubunzima beepdfs Izidalwa ezikwi-Intanethi
Khawufane ucinge ukuba ubulungiselela uxwebhu kwaye xa ulugcina ulwenzile ngefomathi yePDF. Ilungele wena, kunye neetafile zayo, amanani, imifanekiso kunye nesicatshulwa esibonisa yonke into. Kodwa xa kufika ixesha lokuyithumela, yoyika! Iyajikeleza kakhulu. Ngokuqinisekileyo ngaxa lithile ukhe waqubisana nale meko kwaye kuye kwafuneka uze nabo ukuze ucinezele iPDF kwaye ke ukwazi ukuyithumela kumntu ekufuneka efikile.
Ukuba uzibonile ubonakalisiwe kule meko kwaye yinto eyenzekileyo kuwe, okanye eyenzeka kuwe rhoqo, ukuba nezixhobo zokucinezela iPDF kubaluleke kakhulu. Ke ngoko, apha siza kuthetha ngezisombululo kule ngxaki unayo.
1 Cinezela iPDF ngokulula
2 Cinezela iPDF kunye neenkqubo
2.1 I-Jsoft PDF Reducer
2.2 IPressor isiguquli
3 Cinezela iPDF kwi-intanethi
3.3 I-PDF yeFox
4 Cinezela iPDF kwi-Android okanye kwi-iOS
Cinezela iPDF ngokulula
Zininzi iinkonzo apho, xa uthumela amaxwebhu, unciphisa ubungakanani bawo kwaye oko kukwenza ukuba usebenzise ezinye iinkqubo ukuzithumela. Kodwa ukuba awufuni ukuthumela umthengi ikhonkco kwaye unike "umfanekiso ombi" wokuba aye kwenye iwebhusayithi ukukhuphela uxwebhu alucelileyo, ukhetho kukucinezela iPDF.
Oku akunzima njengoko kubonakala, kwaye kuxhomekeke kumgangatho ofuna ukuwunika uxwebhu lokugqibela, kunye nokuvumela le nkqubo, uya kuba nakho ukuzinceda ngazo. Ewe unokhetho oluninzi, zombini iinkqubo kunye namaphepha ewebhu anokukunceda ukunciphisa ubungakanani baloo pdf. Ngaba uyafuna ukuba sincome ezinye?
Cinezela iPDF kunye neenkqubo
I-Jsoft PDF Reducer
Le yenye yeenkqubo zokuqala esizicebisayo, kwaye sikwenza oko kuba, ukongeza koko liboniswa ligama lalo, nto leyo iyisinciphisi sePDF, ke ngoko uza kucinezela iPDF kwaye unciphise ubungakanani bayo, ikwavumela ukuba udibanise iiPDF ezininzi ngaxeshanye okanye zahlule kubini. Kodwa kukho okungakumbi: ungacima amaphepha, ukongeza ii-watermark, uhlengahlengise amaphepha, njl.
Ingxaki kuphela kukuba ifumaneka kuphela ngesiNgesi nangesiFrentshi, kodwa kulula ukusebenza nayo, nokuba uyasiqonda isiNgesi.
Kule meko, le nkqubo ijolise kumsebenzi omnye kuphela, ucinezela iPDF. Ewe unokucinezela nganye nganye okanye kwiibhetshi. Ukongeza, iyabonakala kuba nangona icinezela kakhulu kwaye iyakhawuleza, oko akuthethi ukuba umgangatho okanye ifomathi ilahlekile, eyamkelekileyo.
Ngoku, icala elisezantsi kukuba lihlawulwe. Kukho inguqulelo yasimahla, onokuyisebenzisa, kodwa isikelwe umda kunaleyo ihlawuliweyo, kwaye inokukuchaphazela ngokomda wobunzima, xa ucofa, njl. Malunga nolwimi, ulufumana ngesiNgesi kuphela, kodwa uqondwa kakuhle.
Ukuba ufuna uxinzelelo oluphezulu, ukuya kuthi ga kwi-95%, emva koko zama ukusebenzisa olu khetho. I-NXPowerLite Desktop yinkqubo enendlela elula nesebenziseka lula. Ukongeza, ungongeza iifayile okanye iifolda zokucinezela, ezingayeki kuphela kwiiPDF kodwa zikunika ezinye iindlela onokukhetha kuzo.
Xa uyikhuphela, uya kuba nakho ukukhetha iinguqulelo ezininzi, ngokusekwe kwinto oyifunayo, kwaye ngaloo ndlela awunakuphulukana nesithuba kwi-hard drive yakho ukuba awuzukuyidinga ngokupheleleyo.
Cinezela iPDF kwi-intanethi
Ukuba awufuni ukukhuphela nayiphi na ingxaki kwaye kufuneka uyifake kwikhompyuter yakho, enye indlela yokuyenza kukusebenzisa izixhobo ezikwi-Intanethi ezinikezelwa kumaphepha amaninzi.
Ngokukodwa, ezi sizicebisayo zezi zilandelayo:
Sithethile nawe amaxesha amaninzi malunga nesi sixhobo, kwaye asisetyenziselwa kuphela ukuhambisa uxwebhu olunye ukuya kwelinye; Ungacinezela iPDF. Ukwenza oku, kuyakuvumela ukuba ukhethe oluphi uhlobo loxinzelelo olifunayo, kwaye ulicinezele ngokuthe ngqo, nokuba kukwibhokisi yeDropbox okanye kwiDrive, ke akukho mfuneko yokuba ulayishe nantoni na.
Ewe, xa zineefayile ezinkulu kakhulu, ngamanye amaxesha ziya kukunika iingxaki kwaye ayinakucinezelwa kakuhle kuba inika impazamo.
Esinye isixhobo esikuxelele ngaso yi-SmallPDF. Le webhusayithi ayikuvumeli kuphela ukuba uguqule phakathi kweefomathi, kodwa unokucinezela iPFf ngokulula. Ewe kunjalo, njengakule yangaphambili, kukho amaxesha apho uxwebhu lwePDF lungaphezulu kwe-100MB, uxinzelelo alwenziwa, kuba iwebhu ayinakho ukuyenza; kodwa ukuba zincinci akufuneki zikunike nayiphi na ingxaki malunga nayo.
Ekuphela kwento oya kuyidinga kukulayisha ifayile yePDF kwaye ulinde imizuzu embalwa ukuba icinezelwe, nangona unokuyicinezela ngqo kwiGoogle Drayivu okanye kwiDropbox.
Enye into ebuyayo kukuba unokucinezela iifayile ezimbini ngexesha; Ukusetyenziswa kwesixhobo kuncitshisiwe, ke ukuba kuya kufuneka ucofe iiPDF ezininzi, enye indlela (iinkqubo) ilungele wena.
Ukuba ujonga isixhobo ukongeza kuxinzelelo, ikwavumela ukuba uhlele iPDF kwi-intanethi, kuya kufuneka uzame iPDZZro. Ngokwenyani ngumhleli wePDF kodwa, phakathi kwemisebenzi yayo, kuya kufuneka ucinezele iPDF.
Uyifumene kwiwebhusayithi kodwa kukwakhona iplagi onokuyifaka kuGoogle Chrome ukuze iifayile ezigcinwe kwiGoogle Drayivu zicinezelwe.
Cinezela iPDF kwi-Android okanye kwi-iOS
Okokugqibela, ukuba ungomnye wabo basebenzisa ithebhulethi okanye i-smartphone ukuze basebenze, ukuba nesiguquli esingaqhelekanga esandleni asisoze sikhathaze, akunjalo?
Sincoma oku kulandelayo:
Izixhobo zePDF. Le ye-Android, usetyenziso onokucinezela ngalo iPDF kodwa ukwahlulahlula, ukudibanisa okanye ukuguqula ezinye iifomathi okanye uzivimbe. Ewe unenguqulo yasimahla kunye nohlobo lwenkqubo, kodwa kufanelekile ukuba uyayisebenzisa kakhulu.
Isiguquli sePDF ye-iOS. Oku kuyafana nenkqubo esixoxe ngayo ngaphambili. Yinkqubo onokuthi ucinezele kuyo iPDF ngokwahlukeneyo nangamaqela. Unokuguqula iPDF ibe yiLizwi.
Njengoko ubona, kukho iindlela ezininzi zokucinezela i-PDF ukuze kwixesha elizayo xa uyidinga ungasebenzisa esinye sezixhobo ukuyiphumeza. Sincoma ukuba, kangangoko kunokwenzeka, xa usakha i-PDF yakho uzama ukusebenzisa iifoto ezikumgangatho ophezulu kodwa ubunzima obuncinci, kunye neetafile ... ukuze ingabi nzima kakhulu ukuya kusindisa, kuya kuhlala kufanelekile).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Cinezela pdf
Uhlela njani iifoto ze-Instagram